स्वाब परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाका कर्मचारीलाई कोरोना – BFM 91.2
स्वाब परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाका कर्मचारीलाई कोरोना
विराटनगर, १ असोज । स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाइने विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको प्रयोगशालाका दुई जना प्राविधिक कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
पीसीआर र जनरल प्रयोगशालाका कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि भएपछि स्वाब परीक्षणमा समस्या भएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. चुमनलाल दासका अनुसार पीसीआरका एक र जनरल प्रयोगशालाका एक जना प्राविधिक कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको हो ।
प्राविधिक कर्मचारीमा हिजो साँझ कोरोना देखिएपछि अस्पतालको पीसीआर परीक्षण प्रभावित बनेको छ । दासका अनुसार अटोमेटिक आरएनए एक्ट्राक्सन मेसिनको रिएजेन्ट किट नहुँदा र कर्मचारीमा संक्रमण देखिएका कारण पीसीआर जाँच प्रभावित भएको हो ।
अस्पतालको पीसीआर ल्याबमा १० जना प्राविधिक कर्मचारी खटाइएको थियो । एक जनामा संक्रमण देखिए पनि अरु कर्मचारीले सावधानी अपनाएर काम गरिरहेका छन् । अति आवश्यक भएकाले पीसीआर परीक्षणको काम भने दुःखका साथ सञ्चालन गर्नु परेको डा. दासको भनाइ छ । जनरल प्रयोगशाला भने बन्द गरिएको छ ।
संक्रमितको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’का लागि इमरजेन्सी ल्याब खुला राखेर जनरल प्रयोगशाला दुई दिनका लागि बन्द गरिएको जानकारी उहाँले दिनु भयो । हालसम्म कोशी अस्पतालका ३० जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।
संक्रमितमध्ये २४ जना कोरोना मुक्त भइसकेका छन् । छ जना उपचाररत रहेको जानकारी दासले दिनु भयो ।
← नहरमा डुबेर डेढ वर्षीय नाबालकको मृत्यु
विराटनगरबाट काठमाडौंका लागि चार माइक्रो र एउटा बस छुटे →